I-WhatsApp ayisebenzi, hlola ukuthi iwele | Izindaba zamagajethi
I-WhatsApp ayisebenzi, hlola ukuthi iwile yini
Isikhathi esithile manje, kubonakala sengathi sekuyinto ejwayelekile ukuthi insizakalo yemiyalezo ye-WhatsApp iyeka ukusebenza. Abantu abaningi bathembele kule nsizakalo yemiyalezo yamahhala ngoba iyona enabasebenzisi abaningi. Uma kwenzeka ukunqamuka kwensizakalo, i-SMS akuyona inketho ngaphandle kokuthi ifakwe kuhlelo esilusebenze nenkampani yethu yezingcingo.
Into yokuqala okufanele uyenze lapho uhlelo lokusebenza luqala ukunikeza izinkinga, ukubheka ukuthi insizakalo iwile yini noma sinenkinga ngedivayisi yethu, okungenzeka futhi. Ukuhlola isimo sesevisi kufanele singene esigabeni Sezilungiselelo.
Ngaphakathi Kwamasethingi sinezinketho ezimbili: Isimo senethiwekhi nesimo Sesistimu. Inketho yokuqala kufanele ikhombise Ukuxhuma. Uma sichofoza inketho yesibili, Isimo sesistimu, i-akhawunti ye-WhatsApp ye-WhatsApp izoboniswa lapho izehlakalo zesistimu zivame ukushicilelwa khona, yize kubambezeleka okukhulu.
Enye indlela yokubheka ukuthi insiza yeWhatsApp isebenza kahle yini ukuvakashela lelo khasi iphutha.es. Ukusebenza kwale webhusayithi kusekelwe emibonweni evezwe ngabasebenzisi abahlangabezana nezinkinga, ngakho-ke ubuqiniso bemininingwane bungaba phakathi kokushilo. Kukholamu yesokudla singakhetha izwe lapho sizobheka khona ukuthi abasebenzisi babike izinkinga ngalolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo.
Yini esingayenza ukugwema izinkinga ezengeziwe?
Kuhlala kulula ukuba nezinye izindlela. Ukukhawulela ukuxhumana kohlelo lokusebenza olulodwa lokuthumela imiyalezo kusho ukunqanyulwa ngokuphelele lapho uhlelo luhluleka, iqiniso lokuthi njengabasebenzisi balesi sicelo, uzobe ukuqinisekisile lokho muva nje, selokhu kwathengwa i-Facebook, sekwenzeke kaningi.
Njengamanje emakethe kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo kuWhatsApp ngakho konke ukuthanda:
yocingo Uma uthanda ukushesha kwensizakalo, ubucayi, ubumfihlo nokukwazi ukubhala kusuka kwikhompyutha yethu kuyindlela encomekayo kakhulu. Iphinde isivumele ukuthi sithumele amadokhumende ombhalo, noma ngabe .DOCX .XLSX noma .PDF. Itholakala ngokulanda ngokuphelele mahhala ngaphandle kwemali ekhokhwayo yonyaka.
ViberLolu hlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha, olubonakala ngombala onsomi, ngaphezu kokukwazi ukuthumela imilayezo, lusivumela ukuba senze izingcingo phakathi kwabasebenzisi mahhala nezingcingo noma izingcingo zomakhalekhukhwini kwamanye amazwe ngamanani aphansi kakhulu. Ngisebenzisa insizakalo yezingcingo cishe nsuku zonke namakhasimende ami aphesheya futhi ikhwalithi yezingcingo, ngisho naku-3G, yinhle kakhulu. Inesitolo sayo sohlelo lokusebenza esinikeza amaphakethe wamalebula ahlukaniswe yitimu cishe nsuku zonke. Ibuye ibe nesicelo sedeskithophu, esivumela ukuthi siqhubeke nezingxoxo zethu ngokusebenzisa ikhompyutha yethu. Isicelo samahhala ngaphandle kwezimali zonyaka.
Line. Ikakhulu, lolu hlelo engingaluthandi kangako, ngoba ngibona luqondiswe kubantu abasha, olunemidwebo eminingi nezicelo ezisivumela ukuthi senze izingxoxo zethu zibe ngokwezifiso kakhulu. Ngokusebenzisa isicelo singenza izingcingo nezingcingo zevidiyo phakathi kwabasebenzisi nakuma-landline nama-mobiles aphesheya ngamanani wokuncintisana impela. Itholakala ngokulanda ngokuphelele mahhala ngaphandle kwemali ekhokhwayo yonyaka.
Isithunywa se-Blackberry. Njengoba kwenzeka muva nje kukho konke okwenziwa yiBlackberry, sekuhambe isikhathi emakethe yohlelo lokusebenza lwemiyalezo uma selikhethe ukunikela ngensizakalo yalo ngaphandle kohlelo lwemvelo lwaseCanada. Isevisi isebenza nge-PIN, esivumela ukuthi sihlunge abantu esifuna ukugcina ukuxhumana nabo, ngoba ngaphandle kwaleyo PIN akunakwenzeka ukuthola imiyalezo. Ukukhishwa kwe-PIN, ngakolunye uhlangothi, kulungile, kepha ngakolunye kuyanciphisa futhi kube nzima, ekuqaleni, ukugcina ukuxhumana nomxhumanisi wethu. Uhlelo lokusebenza lwamahhala.
Skype. Sishiya insiza enikezwa yiMicrosoft njengenketho yokugcina, ngoba kunzima ukujwayela iqiniso lokuthi ingaba enye indlela yokufaka izicelo ezivamile zokuthumela imiyalezo, ngoba yazalwa inhloso enkulu yokushaya izingcingo nge-IP mahhala phakathi kwabasebenzisi nabakhokhelwe uma senza izingcingo ezintanjeni zasendlini noma kuma-mobiles. Ibuye isetshenziselwe kabanzi ukubamba izingqungquthela zevidiyo noma izingxoxo phakathi kwabasebenzisi. Itholakala ngokulanda ngokuphelele mahhala ngaphandle kwemali ekhokhwayo yonyaka.
Zonke lezi zinhlelo zokusebenza ayatholakala kuwo wonke amapulatifomu weselula we-iOS, i-Android ne-Windows Phone, ngaphandle kohlelo lokusebenza lweBlackberry Messenger olunezinguqulo ze-iOS ne-Android kuphela.
Kumele kucatshangwe ukuthi lolu hlobo lwezinhlelo zokusebenza, ezixhumeka ngokuqhubekayo kunethiwekhi, zisebenzisa ibhethri eliningi, ngakho-ke Akukhuthazwa ukufaka zonke ezinye izindlela ze-WhatsApp, kuphela lezo esizozisebenzisa kaningi.
Ngokwami, Ngisebenzisa kuphela futhi nginezicelo ezintathu zemiyalezo ezifakiwe: I-WhatsApp (iyona esetshenziswa kakhulu), iTelegram (ukusebenza kwayo kuyashesha kakhulu) neViber (ikhwalithi yayo yezingcingo inhle kakhulu).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-WhatsApp ayisebenzi, hlola ukuthi iwile yini
Ungayikhubaza kanjani imisebenzi yokuthinta kuWindows 8.1
[E3 2014] Sibuyekeza ingqungquthela yakwaSony